विद्या बालनमा खास के छ ? - dautarimedia.com
विद्या बालनमा खास के छ ?
यसै सन्दर्भमा बीबीसीले विद्या बालनको फिल्मी यात्रासँगै उनले निर्वाह गरेको केन्द्रीय भूमिकामाथि विवेचना गरेको छ । त्यसैको भावनुवाद यहाँ प्रस्तुत छ ।शेरनी बन्नुअघि साडीमा सजिएरै विद्या बालन फिल्मको ‘हिरो’ बनिन् । आफ्नो चरित्रलाई जतिसक्दो स्वभाविक र दर्बिलो बनाउने यत्न गरिन् । त्यही प्रयासको प्रतिफल हो, परिणिता, कहानी, द डर्टी पिक्चर, मिसन मंगल र सकुन्तला देवी ।
परिणिताबाट यात्रा विद्या बालनले ९० को दशकमा चर्चित हास्य शृंखला ‘हम पाँच’मा राधिकाको भूमिकाबाट अभिनय सुरु गरिन् । आमाबुबाको इच्छा अनुसार उच्च शिक्षाका लागि उनले केही समयका लागि विश्राम लिइन् । पढाइ सकिएपछि विद्याको यात्रा फिल्मतर्फ बढ्यो । दक्षिण भारतीय र बंगाली सिनेमामा काम गरेपछि प्रदीप सरकारको फिल्म ‘परिणिता’मा काम गरिन् । यही बिन्दुबाट उनको बलिउड यात्रा शुरू हुन्छ ।
‘डर्टी पिक्चर’बाट फड्को परिणिता फिल्मको सफलतापछि विद्या बालनले केही ठूलो प्रोजेक्टमा काम गरिन् । जस्तो कि, ‘भुलभुलैया’मा प्रेतको चरित्र, अमिताभ बच्चनको बहुचर्चित फिल्म ‘पा’मा चिकित्सकको भूमिका, विशाल भारद्वाजको फिल्म ‘इश्किया’मा कृष्णाको भूमिका, ‘लगे रहो मुन्ना भाइ’ मा जान्ह्वीको भूमिका ।
Previous: महाकालीमा जयसिंह धामीको शव खोज्न ड्रोनको प्रयोग